निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई समेत ठग्न सक्ने ती बहादुर को होलान् ? | Safal Khabar
शनिबार, २४ असोज २०७७, ०९ : ३७
काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै नाम चलेका व्यक्तिहरु मध्ये गुरुप्रसाद न्यौपाने पनि एक हुन । बैंकिङ पृष्ठभूमिबाट ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका न्यौपानेले नठगेको र दुःख नदिएको मान्छे फेला पार्न नै मुस्किल रहेको छ । आर्थिक अपचलन तथा गलत धन्दालाई जोगाउन श्रीमतीसँग नक्कली सम्बन्धविच्छेद समेत गर्ने उनले डा. युवराज खतिवडालाई ठगी गरेको कारण नै जलविद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने फलाम तथा स्टिलको पातामा समेत कर बढेको खुलासा भएको छ ।
युवराज खतिवडा जस्तोलाई समेत ठगी गर्न पछि नपर्ने न्यौपानेले अरुलाई बाँकी राखे होलान् त ? आम मानिसको मनमा सहजै प्रश्न उठन सक्छ । युवराज खतिवडा संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको एक एजेन्सीमा श्रीलंकामा काम गर्दै थिए । न्यौपाने पूर्वतिरको एक आयोजना निर्माण गर्ने लाइसेन्स लिएका थिए । त्यसमा लगानीका लागि उनले लगानीकर्ता खोज्न थाले । लगानीकर्ता खोज्ने क्रममा न्यौपानेले राम्रो फाइदा हुने लोभ देखाएर खतिवडालाई पैसा हाल्न लगाए ।
खतिवडा जस्तै ३ सय जना भन्दा बढीले सो आयोजनामा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरे । पैसा देख्दा महादेवको तेस्रो नेत्र खुल्छ भने जस्तै न्यौपानेले धमाधम पैसा उठाए । आयोजना पनि बन्यो । आयोजनामा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरियो । डा.युवराज खतिवडा लगायतले लगानी गरेको पैसा हालसम्म पनि फिर्ता भएको छैन् । जानकारहरुका अनुसार पटक पटक खतिवडाले गुरु न्यौपानेलाई पैसा फिर्ता गर्न ताकेता गरे । कहिले फोन नउठाएर बसे तथा कहिले आफू बिरामी भएको नाटक गरे ।
आफ्नै श्रीमतीसँग त नक्कली सम्बन्धविच्छेद गर्न तयार हुने न्यौपानले खतिवडाको पैसा तिर्लान् भन्ने कुरा परको विषय बन्यो । न्यौपानेले जलविद्युत् आयोजनाको पेनस्टक पाइप निर्माणका लागि भारतबाट फलाम तथा स्टिल पाता ल्याएर बेल्डिङ गर्ने कम्पनी स्थापना गरेका छन् । अपि स्टिल नाम दिइएको उक्त कारखाना हेटौडामा रहेको छ ।
आफूले लगानी गरेको पैसा समेत फिर्ता नगर्ने, स्टिल तथा फलामको पाता ल्याएर बेल्डिङ गर्दै न्यौपानेका बाबु छोराले गलत धन्दा चलाएको जानकारी राखेका खतिवडा पनि अरुलाई जे जस्तो प्रभाव परे पनि परोस् तर गुरु न्यौपानेलाई तह लगाएर छाड्ने भन्दै कस्सिए । उनले यसअघिको बजेट निर्माणमा समेत सो विषय राख्न खोजेका थिए । अघिल्ला दुइ बजेटका कुन कारणले हो, उनले यो विषय बजेटमा राख्न पाएनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने न्यौनेलाई तह लगाउने भन्दै स्टिल तथा फलामको पातामा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लगाइदिए ।
एक प्रतिशत रहेको भन्सार शुल्कलाई चार प्रतिशतले बढाएर पाँच प्रतिशत बनाइदिए । त्यसको मारमा गुरु न्यौपानेहरु परेनन्, किन भन्दा उनीहरुलाई त्यो कुरा अर्थमन्त्रालयका बजेट निर्माणमा संलग्न एक कर्मचारीले पैसा खाएरै सुनाइदिएका थिए । सोही कारण उनीहरुले फलाम र स्टिल पाताको आयात नै गर्न छाडिदिए । त्यसको सबैभन्दा बढी मार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका अन्य प्रवद्र्धकलाई प¥यो । खतिवडाले न्यौपानेलाइ तह लगाउन बजेटमा राखेको व्यवस्था केही दिन पहिले बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरिदिएको छ ।
धादिङको गल्छी नजिक त्रिशुली नदीमा निर्माण हुने भनिएको त्रिशुली गल्छी आयोजनाको नाममा गुरु न्यौपाने गरेको झण्डै दुई हजार बढीलाई ठगी गरेको पाइएको छ । सो आयोजनाको संस्थापक लगानीकर्ता हुने भन्दै उनले न्यूनतम एक लाखदेखि ५० लाखसम्म रकम उठाएका थिए । पैसा फिर्ता देऊ भन्दै न्यौपानेको कार्यालय रहेको थापाथलीस्थित टे«ड टावरमा दैनिक दर्जनौ व्यक्ति पुग्ने गरेका छन् । उनीहरुले आफूलाई न्यौपानेले आयोजना निर्माण गर्ने, ठूलो नाफा हुन्छ भन्दै फसाएको र हालसम्म कुनै पनि प्रगति नभएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
कार्यालयमा भएपनि न्यौपानेले आफू नभएको भन्दै गुनासो गर्न आउनेलाई त्यत्तिकै फिर्ता पठाउने गरेका छन् । यस्तै जोर जबरजस्ती गर्नेलाई कार्यालयमा राखिएका गुण्डा प्रयोग गरेर पनि खेदाउने गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा ठगीको आरोपमा न्यौपानेलाई कारवाही गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । सो बारेमा न्यौपानेसँग बुझ्न पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा समेत उनले उठाएनन् ।